स्वास्थ्य पेजकिन मान्छेको निद्रा बिथोलिँदैछ ? - स्वास्थ्य पेज किन मान्छेको निद्रा बिथोलिँदैछ ? - स्वास्थ्य पेज
किन मान्छेको निद्रा बिथोलिँदैछ ?
किन मान्छेको निद्रा बिथोलिँदैछ ? यसमा खराब जीवनशैली मुख्य कारण बनेको छ। केही समयअघि निद्राकै सम्बन्धमा एक सर्वेक्षण भएको थियो । जसअनुसार खासगरी यी पाँच कारणले निद्रा बिथोलिने देखिन्छ। चिन्ता, तनाव ९५४ प्रतिशत, पर्यावरण ९४० प्रतिशत, कार्य वा विद्यालयको सेड्युल ९३७ प्रतिशत, मनोरञ्जन ९३६ प्रतिशत र स्वास्थ्य कारण ९३२ प्रतिशत छ ।
किनभने हामी पर्याप्त निदाउन सकेकै छैनौं । सामान्यतस् हामीले सातदेखि आठ घण्टासम्मको निद्रा लिनुपर्छ। तर, समयले मात्र पुग्दैन । निद्रा गहिरो हुनुपर्छ । यदि गहिरो निद्रा लिइएन भने के हुन्छ ?
१, गहिरो निद्रा पाउनका लागि मुख्यतः मानसिक रुपमा स्वस्थ्य हुनु आवश्यक छ। सुत्नुअघि मनमा कुरा खेलाउने, चिन्ता लिनेजस्ता काम गर्नु हुँदैन ।
२, सुतेको बेला आयव्ययको हिसाब लगाउने, पारिवारिक समस्यामा घोत्लिने, नकारात्मक विचारहरू ल्याउने जस्ता कुराले पनि निद्रा बिथोलिन्छ। त्यसैले सुत्नुअघि यस्ता बिकारयुक्त विचारहरू मनमा ल्याउन हुँदैन ।
३, सुत्नुअघि त्यस्ता कुराहरू सोच्नु हुँदैन, जसले मनलाई दुखी तुल्याउँछ । अक्सर मानिस ओछ्यानमा पल्टिएर मनमा अनेक कुरा खेलाउन थाल्छन्, विगतका गल्तीहरू सम्झिन्छन्, भविष्यका बारेमा कल्पना गर्छन् । यसले पनि निन्द्रा बिथोल्छ । यस्ता कुराहरू सोचेर केही फाइदा छैन । दिनमा शरीर सक्रिय भएको बेला यस्तो काम गर्नुपर्छ, जसले आफूलाई सन्तुष्ट तुल्याउँछ ।
४, सुत्नुअघि मनलाई स्थिर, खुसी र सन्तुष्ट राख्नुपर्छ । भविष्यको कुरा सोचेर वा विगतका गल्तीहरुमा पछुतो गरेर केहि उपलव्धी छैन भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ ।
५, सुत्नुअघि धेरै खानेकुरा खानु ठिक होइन । यसले पेट भद्दा हुन्छ र राम्ररी निन्द्रा लाग्दैन । अधिक पानी वा झोलयुक्त पदार्थ सेवन गर्दा पनि पिसाब लाग्छ, जसले निद्रा बिथोलिदिन्छ। सुत्नुअघि हल्का एवं सुपाच्य खानेकुरा सेवन गर्नुपर्छ ।
६, सुत्ने र उठ्ने समय तालिका नियमित हुनुपर्छ। निश्चित समय तालिकामा सुत्ने अभ्यास गरिएको छ भने त्यही समयमा निद्रा लाग्छ ।
७, शारीरिक रुपमा निष्कृय हुँदा पनि राम्ररी निद्रा लाग्दैन । त्यसैले दिनमा शारीरिक रुपमा सक्रिय रहनुपर्छ । त्यस्तै व्यायाम गर्नुपर्छ, हिँडडुल गर्नुपर्छ, सानोतिनो घरायसी काम गर्नुपर्छ ।
८, सुत्नुअघि हल्का खानेकुरा सेवन गर्ने, केही क्षण हिँडडुल गर्ने, हल्का व्यायाम गर्ने, प्रणायाम गर्ने, ध्यान गर्नेजस्ता सिलसिलाबद्ध क्रियाले पनि गहिरो निद्रा लाग्छ ।
९, ओछ्यान सजिलो हुनुपर्छ । साथै सुत्ने कोठाको वातावरण प्रतिकूल हुनुहुँदैन । राति चर्को ध्वनि आउने, हल्लीखल्ली हुनेजस्ता कुराले पनि निद्रा बिथोलिन्छ ।
१०, सुत्नुअघि चाखलाग्दो पुस्तक पढ्नुहोस् । मधुरो संगीत सुन्नुहोस् । यसले ध्यान अन्यत्र भङ्ग हुँदैन र निद्रा लाग्छ ।
१ , काँचो प्याजको सेवन गर्नुपर्छ ।
२, पुदिनाको पात पानीमा उमालेर उक्त पानी सेवन गर्नुपर्छ ।
३, सुत्नुअघि मनतातो दूध पिउनुपर्छ ।